फोनमा ‘हेल्लो’ भन्ने चलन कसरी चल्यो ? – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी न्युज/टेक अपडेट / फोनमा ‘हेल्लो’ भन्ने चलन कसरी चल्यो ?
ICT Khabar/आइसिटी खबर June 23, 2019	आइसिटी न्युज/टेक अपडेट, इतिहास Leaveacomment 289 Views
काठमाडौँ । फोन उठाउने बित्तिकै पहिलो शव्द हुन्छ : हेल्लो । त्यसपछि मात्र फोन गर्ने मानिससँग बाँकी कुराकानी हुन्छ । आखिर फोनमा किन र कसरी हेल्लो भन्ने चलन आयो होला ? यो सबैको चासोको विषय हुन सक्दछ । यस विषयमा अनेक प्रकारका दाबीहरु छन् । तर त्यसमध्ये एउटा भरपर्दो तथ्य चाहिँ यस्तो छ ।
Previous २५ डलरको कम्प्युटरबाट नासामाथि साइबर हमला
Next प्रहरीले फेसबुकबाटै सोधपुछ ! सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको चरित्र हत्या गर्नु कानुन विपरित